Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Baabuurta Bixiya | Warshadda Qaadista Baabuurta Shiinaha
Wiishka mootada mobile-ka ayaa aad ugu habboon dhammaan noocyada dukaamada dayactirka baabuurta, kor u qaadista gaariga ka dibna hagaajinta gaariga. Isagu waa fudud yahay waana la qaadi karaa, si fudud ayaa loogu wareejin karaa meelo kala duwan oo shaqo ah, waxqabad wanaagsan ayuu ku leeyahay badbaadinta degdegga ah ee baabuurta.
Wiishka maqaska mootada ayaa ku habboon bandhig ama dayactirka mootooyinka. Wiishka mootadayadu wuxuu leeyahay culeys caadi ah 500kg waxaana loo casriyeyn karaa 800kg. Waxay guud ahaan qaadi kartaa mootooyinka caadiga ah, xitaa mootooyinka culus ee culus ee Harley, maqasyadeena mootooyinka ayaa waliba si fudud ku qaadi kara,
2 wiishka sagxadda sagxadda dusheeda waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadaha ka mid ah Qalabka Dayactirka Gawaarida. Tuubbada Haydarooliga iyo fiilooyinka isku dheelitirka ayaa ka socda dabaqa waxaana daboolaya saxan bir ah oo saxan bir ah oo dusha sare leh oo qiyaastii 1 "dheer ku jira wiishka hoose (Floor Plate).